Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Priority medicines for mothers and children 2011 မိခင်နှင့် ကလေး ဦးစားပေးဆေးများ
Priority medicines for mothers and children 2011 မိခင်နှင့် ကလေး ဦးစားပေးဆေးများ
မိခင်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဦးစားပေး ဆေးဝါးများစာရင်း (၂ဝ၁၁)
မိခင်တွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ပေးရေးဟာ ကမ္ဘာမှာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းကြီးတခု ဖြစ်တယ်။ တနှစ်ကို ၅ နှစ်အောက်အရွယ် ကလေးပေါင်း ၈့၁ သန်း နဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးပေါင်း ၁ဝဝဝ ယောက် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း သေဆုံးနေကြတယ်။ ဒီသေဆုံးရမှုတွေထဲက အများစုကို ကာကွယ်နိုင်သလို ဈေးမကြီးလှတဲ့ ကုသမှု ကိုလဲ ပေးနိုင်တာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုဆေးဝါးတွေဟာ လူအများစုလက်လှမ်းမီရာနဲ့ ဝေးနေတယ်။
ဒီ Priority Medicines for Mothers and Children မိခင်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဦးစားပေး ဆေးဝါးများစာရင်းကို World Health Organization ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၊ UNFPA နဲ့ UNICEF တွေက တိုင်းပြည်တိုင်းကနေ ရွေးချယ်နိုင်ကြပြီး၊ လူအများစု လက်လှမ်းမီစေအောင် လုပ်နိုင်ကြစေဘို့ ပြုစုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးတွင်း၊ မွေးကင်းစ၊ နဲ့ ကလေးတွေမှာ ရောဂါဖြစ်နှုန်းရော သေဆုံးမှုနှုန်းတွေပါ လျှော့ချနိုင်စေဘို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
၁။ Post-partum haemorrhage ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးဆင်းခြင်း
Obstetric haemorrhage မီးဖွါးနေရင်း သွေးဆင်းတာဟာ ကမ္ဘာမှာ Maternal mortality မီးဖွါးတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သေဆုံးရတာရဲ့ ထိပ်ဆုံးအကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်။ တနှစ်မှာ ၁၂၇ဝဝဝ ယောက် သေဆုံးနေရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Postpartum haemorrhage မီးဖွါးပြီးနောက် သွေးဆင်းတာက အများဆုံးဘဲ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေမှာ ကလေးဖွါးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးတာ မှန်သမျှရဲ့ ၅ဝ% ရှိတယ်။
1. Oxytocin: 10 IU in 1-ml ampoule
2. Sodium chloride: injectable solution 0.9% isotonic or
3. Sodium lactate compound solution – injectable (Ringer’s lactate)
၂။ Severe pre-eclampsia and eclampsia ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆိုးတိုးဝါးဝါး သွေးဆိပ်တက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း နဲ့ သွေးဆိပ်မတက်မီအဆင့် ရောဂါတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်တွေမှာ တကယ့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာကြီးတခု ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ Maternal mortality မီးဖွါးတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သေဆုံးရသူပေါင်း ၅ဝဝဝဝ သောင်း ရှိတယ်။
1. Calcium gluconate injection (for treatment of magnesium toxicity): 100 mg/ml ina10-ml ampoule
2. Magnesium sulfate: injection 500 mg/ml ina2-ml ampoule, 500 mg/ml ina10-ml ampoule
၃။ Maternal sepsis မီးတွင်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
ကလေးမွေးရာကနေဖြစ်ဖြစ်၊ သားပျက်တာကနေဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်လို့ သေဆုံးရတာ အတော်များတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်လို့ မဟုတ်ဘဲ ပိုးဝင်ပြီး သေဆုံးရတာက ၁၅% ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ကို စနစ်တကျ မဖျက်တာ များနေဆဲဖြစ်တယ်။
1. Ampicillin: powder for injection 500 mg; 1 g (asasodium salt) in vial
2. Gentamicin: injection 10 mg; 40 mg /ml ina2-ml vial
3. Metronidazole: injection 500 mg ina100-ml vial
4. Misoprostol: tablet 200 μg
၄။ Sexually transmitted infections လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း HIV အပါအဝင် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်နေကြသူပေါင်း ၁ သန်းလောက် ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကလေးမီးဖွါးတာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းရင်းပြီးရင် အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးကြရမှုက အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ကူးစက်ရောဂါဝင်ရင် ချက်ချင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေအပြင် နာတာရှည်ရောဂါ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အဲဒါတွေထဲမှာ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ၊ သားအိမ်ဝကင်ဆာ၊ ကလေးရော လူကြီးပါ အသက်တိုတာတွေ ပါတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကိုရော အထဲက ကလေးကိုပါ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။
၁။ Uncomplicated genital chlamydial infections: (ကလာမိုင်ဒီးယား)
1. Azithromycin: capsule 250 mg; 500 mg or oral liquid 200 mg/5 ml
၂။ Gonococcal infection – uncomplicated anogenital infection: (ဂနိုရီးယား)
2. Cefixime: capsule 400 mg
၃။ Syphilis: (ဆစ်ဖလစ်)
3. Benzathine benzylpenicillin: powder for injection 900 mg
4. benzylpenicillin ina5-ml vial; 1.44 g
5. benzylpenicillin ina5-ml vial
၅။ Preterm birth နေ့မစေ့ ကလေးမွေးခြင်း
မွေးသမျှထဲမှာ နေ့မစေ့ဘဲမွေးတာ ၆-၇% ရှိတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရော ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာပါ Neonatal mortality ကလေးဟာ တနှစ်အတွင်း သေဆုံးနိုင်တယ်။ Neonatal deaths အသက် တနှစ်အောက်သေဆုံးသမျှထဲမှာ ၂၄% သေဆုံးနေတယ်။
1. Betamethasone: injection 5.7 mg/ml as Betamethasone sodium phosphate 3.9 mg (in solution) or
2. Betamethasone acetate3mg (in suspension) in an aqueous vehicle or
3. Dexamethasone – injection4mg dexamethasone phosphate (as disodium salt) in 1-ml ampoule
4. Nifedipine: immediate release capsule 10 mg
၆။ Maternal HIV/AIDS and malaria
1. Guidelines for the treatment of malaria, second edition
2. Rapid advice: Use of antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection in infants
၇။ Pneumonia နူမိုးနီးယား
ကလေးတွေ သေဆုံးရခြင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး အကြောင်းခံရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ၅ နှစ်အောက် ကလေးပေါင်း တနှစ်မှာ ၁့၆ သန်း သေဆုံးနေကြရရှာတယ်။ ဒါဟာ ဒီအရွယ်ကလေးတွေ သေးဆုံးရမှု စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၈% ရှိတယ်။
၈။ Diarrhoea ဝမ်းလျှော-ဝမ်းပျက်
ဝမ်းလျှော-ဝမ်းပျက်တာဟာ ကလေးတွေသေဆုံးရခြင်းထဲမှာ ဒုတိယလိုက်တယ်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေးတွေ အအာဟာရ ချို့တဲ့ရခြင်းရဲ့ ပင်မအကြောင်းခံလဲ ဖြစ်တယ်။ နှစ်တိုင်း ကလေးပေါင်း ၁့၃ သန်း သေဆုံးနေကြရရှာတယ်။
၉။ Malaria ငှက်ဖျား
အာဖရိကမှာ ၄၅ စက္ကန့်တိုင်း ကလေးတယောက် သေဆုံးနေကြတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တုံးက ငှက်ဖျားဖြစ်သူပေါင်း ၂၄၇ သန်း ရှိခဲ့တယ်။ ၁ သန်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့တယ်။ အာဖရိက မှာနဲ့ ကလေးတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။
1. Artemisinin combination therapy (ACT): strengths and combinations according to WHO treatment guidelines 2010, dispersible tablet or flexible oral solid dosage form and dose optimized
2. Artesunate: rectal and injection dosage forms 50–200 mg
၁ဝ။ Neonatal sepsis တနှစ်အောက်ကလေး ပိုးဝင်ခြင်း
၁၁။ HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)
၂ဝဝ၈ မှာ ကလေးပေါင်း ၂့၁ သန်းဟာ (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) ပိုးနဲ့ နေခဲ့ကြရတယ်။ ၁့၈ သန်းက ဆာဟာရ-အောက်ပိုင်းက ကလေးတွေ ဖြစ်တယ်။ အများစုဟာ မအေဆီကနေ ကူးလာကြတာဖြစ်တယ်။ ဆေးကို သေသေခြာခြာ မကုသဘဲ နေရင် ၃ ပုံ ၁ ပုံက တနှစ်မပြည့်ခင် သေဆုံးကြမယ်။ ၂ ပုံ ၁ ပုံက ၂ နှစ်ဆိုရင် သေကြရတယ်။
Standard regimen for first-line anti-retroviral treatment:
1. 1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor plus2nucleoside reverse transcriptase inhibitors such as the fixed dose combination of lamivudine + nevirapine + zidovudine - tablet 30 mg + 50 mg + 60 mg; 150 mg+ 200 mg + 300 mg
၁၂။ Vitamin A deficiency ဗီတာမင် (အေ)
ဝက်သက်ရောဂါ နဲ့ ဗီတာမင် (အေ) ချို့ယွင်းတာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တုံးက ကလေးပေါင်း ၁၆၄ဝဝဝ ယောက် ဝက်သက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။ အများအားဖြင့် ၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
1. Vitamin A: capsule 100 000 IU strength; 200 000 IU strength
၁၃။ Palliative care and pain အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး
2. Morphine: granules 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg, injection 10 mg/ml, oral liquid 10 mg/5 ml, variable flexible oral solid dosage forms
3. Paracetamol: variable flexible oral solid dosage forms
၁၄။ Tuberculosis တီဘီ
၁၅။ HIV, TB prophylaxis, Pneumocystis carinii pneumonia (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)၊ တီဘီ နဲ့ အဆုပ်နာတမျိုး
၁၆။ Neonatal care တနှစ်အောက်ကလေးများအတွက်
၁၇။ Cord care ချက်ကြိုးဂရုစိုက်ခြင်း
၁၈။ Vitamin K deficiency ဗီတာမင် (ကေ) နည်းခြင်း